स्रोत नखुलेको १० लाख भारुसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ - Top Nepal News
माघ ७, २०७८ मा प्रकाशित
महोत्तरी । महोत्तरीबाट स्रोत नखुलेको भारतीय रकम र नक्कली नेपाली रुपैयाँको नोटसहित दुई जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई जिल्लाको छुट्टा–छुट्टै ठाउँबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
भारतीय सीमावर्ती भिठामोडबाट झण्डै रु. १० लाख भारतीय रुपैयाँ र चार वटा भारतीय बैंकको चेकसहित एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत सितामढी जिल्ला सुरसन्ड ६ बस्ने ३९ वर्षीय उदयकुमार साह छन् ।
भारतबाट नेपाल आएका उनको साथबाट रु. ९ लाख ९७ हजार ९ सय ५० भारु र एचडीएफसी बैंकको ४ थान चेक बरामद भएको महोत्तरी प्रहरीका प्रबक्ता एवं डीएसपी प्रकाश बिष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार चार वटै चेकमा रु. २ लाख ४० हजार रकम लेखिएको छ ।
पक्राउ परेका साहलाई आवश्यक कारवाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बारा पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै, मटिहानी नगरपालिका ३ स्थित एक पेट्रोल पम्पमा आएका एक जना भारतीय नागरिकलाई रु. २ हजार नक्कली नेपाली नोटसहित पक्राउ गरिएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा बीआर३०ए २४०३ नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका सितामढीको देआराबारी निवासी ४० वर्षीय नुरुल होदा छन् । उनको साथबाट नेपाली रु. १ हजार दरको एउटै सिरियल नम्बर भएको नक्कली नोट फेला परेको बिष्टले बताए ।
उनलाई नियन्त्रणमा लिई खोटा चलन मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।